China Ine Sutukesi Uye Bikini Emojis, Spain Inotsvaga Kudzoka Kwevashanyi vagadziri uye vanotengesa | Mvura yakachena
Ine Sutukesi Uye Bikini Emojis, Spain Inotsvaga Kudzoka Kwevashanyi
Spain yakadzokorora huwandu hwayo hwekufa kwechirwere checoronavirus nemusi weMuvhuro uye yakakurudzira vachengeti vekunze kuti vadzoke kubva muna Chikunguru sezvo ichirerutsa imwe yekukiya kwakanyanya muEurope, kunyangwe mabhizinesi ekushanya aifungidzira nezve kuponesa mwaka wezhizha.
Nyika yechipiri-yakashanyirwa nyika yakavhara madhoo ayo nemabhishi muna Kurume kubata denda reCOVID-19, ichizomisa kugara kwemasvondo maviri kune vashanyi vekunze kwenyika. Asi izvo zvinodikanwa zvichabviswa kubva munaChikunguru 1, chirevo chehurumende chakadaro.
"Zvakaipisisa zviri kumashure kwedu," Gurukota rezvekunze, Arancha Gonzalez Laya akatumira tweet nema emojis ebhaini, magirazi ezuva uye sutukesi.
“Muna Chikunguru tichavhura Spain zvishoma nezvishoma kuvashanyi vekunze, kusimudzira kugara kwavo voga, kuona kuchengetedzeka kwehutano hwepamusoro. Tinotarisira kukugamuchirai! ”
Yakaunzwa muna Chivabvu 15 pasina kunyeverwa kushoma, iyo yekuisa yega yakakonzera kuvhiringidzika muindasitiri yekushanya uye kusagadzikana neyakavakidzana France. Nekusimudza, hurumende inotarisira kubhadhara kukanganiswa kwekutanga kwekutaurirana uye kuve munzvimbo yakasimba yekukwezva vashanyi vekunze chirimo chino.
Spain inowanzo dhonza vanhu vanosvika mamirioni makumi masere pagore, neyakavakirwa yekuverengera inopfuura gumi nemaviri muzana yezvakakomba zvigadzirwa zvemumba uye mugove wakakura wemabasa, saka mwaka wezhizha wakakosha pamikana yekudzikisira kudzikira kuri kudzikira.
Bazi rezvehutano rakagadzirisa zvakare huwandu hwevakafa hwakadzikira nevanhu vangangoita zviuru zviviri kusvika makumi maviri nezvisere nemazana matanhatu nemakumi masere nematanhatu mushure mekuongorora data rakapihwa nematunhu, rikati vanhu makumi mashanu chete vakafa nehutachiona muvhiki rapfuura, kudonha kwakaratidzwa kubva kumavhiki apfuura. Huwandu hwese hwenyaya hwakagadziridzwa zvakare kusvika pa235,400.
Mabhawa nemaresitorendi muMadrid neBarcelona akabvumidzwa kuvhura nzvimbo dzekunze pahafu yekugona kubva Muvhuro, asi mazhinji akasara akavharwa sezvo varidzi vaiyera kukosha kwekupa kune vashoma chete.
Vamwe veavo vakavhura vaive vasina tariro.
"Zvakaoma, hatisi kuzokwanisa kuchengetedza mwaka wevashanyi, kunze kwekunge [vokune dzimwe nyika] vauya," akadaro Alfonso Gomez, muridzi weresitorendi muBarcelona.